उर्दू देखि अंग्रेजी अनुवाद – Vocre
उर्दू देखि अंग्रेजी अनुवाद
उर्दू देखि अंग्रेजी अनुवाद को लागी केहि सुझावहरु जान्नुहोस् — र तपाईंको लागि यो गर्नको लागि एउटा एप कहाँ फेला पार्ने.
उर्दू मुख्यतया पाकिस्तान र दक्षिण एसियामा बोलिने इन्डो-आर्यन भाषा हो. यो हिन्दी संग पारस्परिक रूपमा बुझ्न योग्य छ, को वक्ताको रूपमा उर्दू र हिन्दी सामान्यतया एक अर्कालाई बुझ्न सक्छ. उर्दू र हिन्दी यति नजिकको सम्बन्धमा छन् कि भाषालाई प्रायः हिन्दी-उर्दू वा हिन्दुस्तानी भनिन्छ.
उर्दू कहाँ बोलिन्छ?
धेरै 170 विश्वभर करोडौं मानिस उर्दू बोल्छन्. The language is predominantly spoken in Pakistan and India and is the official language of Pakistan.
संसारमा अन्यत्र, को उर्दू भाषा संयुक्त अरब इमिरेट्समा बोलिन्छ, युनाइटेड किंगडम, र संयुक्त राज्य अमेरिका.
धेरै 300,000 अमेरिकीहरू र अधिक 400,000 British citizens speak Urdu.
उर्दू देखि अंग्रेजी अनुवाद सुझाव
अङ्ग्रेजीबाट केही द्रुत उर्दू लिन चाहनुहुन्छ अनुवाद सुझावहरू? हामीले तपाईंलाई भाषा अनुवाद सिक्न र व्याकरणको अज्ञात संसारहरूमा तपाईंको औंलाहरू डुबाउन मद्दत गर्न केही युक्तिहरू पाएका छौं।, भोब, उच्चारण, र अधिक!
कुनै पनि भाषा सिक्नको लागि सुझावहरू
यदि तपाइँ कसरी उर्दूलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने सिक्न चाहनुहुन्छ भने (वा त्यो कुराको लागि कुनै पनि भाषा!), हामी भाषा अनुवाद एप डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्छौं.
Vocre's अफलाइन अनुवादक जस्ता एपहरूले तपाईंलाई आधारभूत व्याकरण र शब्द शब्दहरू सिक्न मद्दत गर्न सक्छ — र तपाईंको लागि आवाजलाई पाठमा अनुवाद गर्न पनि सक्छ।. तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच नभएको बेला पनि एप प्रयोग गर्न आफ्नो स्मार्टफोनमा शब्दकोश डाउनलोड गर्नुहोस्.
Vocre सबै भन्दा राम्रो भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो र मा iOS को लागी उपलब्ध छ App Store र एन्ड्रोइड मा गुगल प्ले स्टोर.
सिक्दै कुराकानी उर्दू भाषा लेख्न सिक्नु भन्दा सजिलो छ. प्रायः बोलिने उर्दू शब्दहरू सिकेर, you’ll be able to understand much of what is said in conversation.
अवश्य, उच्चारण नयाँ भाषा सिक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मध्ये एक हो. यदि तपाइँ शब्दहरू सही रूपमा उच्चारण गर्नुहुन्न भने, तपाईं एक नौसिखिया वक्ताको रूपमा बाहिर खडा हुनुहुनेछ!
भाषा सिक्ने एपहरू, जस्तै Vocre, can help you learn the correct pronunciation of words in Urdu.
उर्दू व्याकरण सिक्दै
जब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि वाक्य कसरी निर्माण गर्ने, you can mix and match different words to make full sentences and then phrases.